Boliiska Kenya oo xirey 7 ruux oo Soomaali ah – Radio Muqdisho
Boliiska Kenya oo xirey 7 ruux oo Soomaali ah
Boliiska deegaanka Lari ayaa xabsiga u taxaabay 7 ruux oo Soomaali ah kuwaas oo lagu eedeeyay in ay si sharci daro ah ku soo galeen dalka Kenya sida ay warbaahinta dalkaasi ay u sheegeen saraakiisha Boliiska Kenya.
Dadkan Soomaalida ayaa laga qabtay xilli ay marayeen Wadada Nakuru ee gasha magaalada Nairobi, daraawalkii waday gaariga dadka la qab qabtay ay saarnaayeen oo lagu magacaaabo Gerald Ochieng, ayaa isku dayay in uu baxsado hase yeeshee ugu dambeyntii waxaa gacanta ku dhigay Ciidanka Boliiska.
6 kamid ah dadka Soomaalida ah oo Boliiska ay qabteen midkoodna kuma hadlaynin Luuqadaha Kiswahili iyo English marka laga reebo hal qof oo ku hadli karay Luuqada English-ka.
Madaxa Boliiska deegaanka Lari Alfred Makoma ayaa sheegay in 4 Dumar ah 3 Nin ay si sharci daro ah ku soo galeen dalka Kenya iyagoo sheegay in ay ku sii jeedaan xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay ee Eastleigh oo ku taala magaalada Nairobi.
“ waxay haysteen waxyaabaha shakhsigu si gaarka ah u leeyahay sida Dharka oo kale laakiin ma aysan haysanin wax documenti ah ” ayuu yiri Makoma.
Isagoo intaa ku daray in saraakiisha wadada roondeynaysay ay Jidka ku joojiyeen gaariga balse wadaha gaariga uu isku dayay in uu si xawli ah ku dhaafo waxaana lagu horgooyay gaari kale taas oo keentay qabashada gaarigan.
Makoma oo ah Taliyaha Boliiska deegaanka Lari ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah oo ay qabteen magacyadooda ay kala yihiin Cabubakar Faraax, Xussein Cali, Xassan Gail, Najima Faraax, Nashen Cabdbulahi, Nurro Cadow and Xabiibo Jillo.
“waxaan dareensanahay in wadaha gaariga uu qarinaayo akhbaar muhiim ah,sidaa darteed waxaan sameynay diiwaangelinay gaariga si loogu sheego qofka iska leh gaariga Lab iyo Dhegid mid kuu yahay si loo ogaado qofkii soo kireystay gaariga maalintaas” ayuu hadalkiis ku daray Makoma.
Taliyaha Boliiska ayaa sheegay in dadkan Maxkamad la horgeyn doono si loogi oogo dambi ah in ay sharci daro ku soo galeen wadanka Kenya.
Xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Lari Mr Mburu Kahangara ayaa amaanay Ciidanka Boliiska sida ay u feejigan yihiin xilli dalka uu wajahayo weerero argagaxisinimo.
Isku Aadka Quarter Finalka Koobka Champions League-ga oo Lagu Dhawaaqay
Isku Aadka Quarter Finalka Koobka UEFA Europa League-ga oo Lagu Dhawaaqay